Digniin iyo cambaarayn dusha looga tuuray Shariif Xasan Sh. Adan | Calanka Somalia
← Geelloow: Horumarin Af Mise Horseed Aafo?!
DHIBAATOOYINKII HAWIYE IYO DAAROOD U GEYSTEEN QOWMIYADA DIGIL IYO MIRIFLE →
Digniin iyo cambaarayn dusha looga tuuray Shariif Xasan Sh. Adan
Kulan gaar ah oo ay 16/12/2012 isugu yimaadeen masuuliyiinta Xisbiga Waamo National Party oo lagu qabtay xarunta dalka Norway ee Oslo, ayaa lagu soo qaaday qorshaha Shariif Xasan Sh. Adan uu ku doonayo in uu isku-dhacyo weyn ka sameeyo degaamo ka mid gobolada Somaliya.
Kulankaas ayaa laga soo saaray baaq ku aaddan in waxa uu wado Shariif Xasan ay tahay tallaabo aan sina loo qaadan karin. Bayaanka ayaa lagu muujiyey sida masuuliyad darrada ah ee Shariif Xasan uu ugu xad-gudbayo nabadda iyo wada noolaanshaha dadka Somaliyeed, waxaana looga digay in uu ka waantoobo, farahana uu kala baxo maamulidda gobolo Somaliyeed oo iyagu iminka ammaan iyo nabadgelyo haysta, gaar ahaan Gobolka Sh/hoose.
Bayaan ayaa u qornaa sidan:
Waamo National Party wuxuu si weyn uga xun yahay tallaabooyinka miyir la’aanta ah ee Shariif Xasan Sh. Adan ka wado dalka Somaliya. Shariif Xasan wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka qabay xilkii iyo masuuliyaddii ay Ummadu ku aamintay. Waxaynu wada ogsoonahay, ilaa iyo markii Somaliya xukuumad loogu dhisay dalka Kenya ee sannadkii 2004, debindaabyo iyo dad isku-dirid ayuu kula dhex jirey Ummadda Somaliyeed. Kaddib markii loo adkaysan waayey tallaabooyinka sir-gaxan ee uu qaadyo, ayey lagama maarmaan noqotay in Xilka iyo masuuliyadda Baarlamaanka laga xayuubiyo.
Halkaas kuma joogsan. Shariif Xasan isagoo aan weli la xisaabin oo aan waxba la iska weydiin dembigii uu Qaranka Somaliya ka galay, ayuu wuxuu si khiyaano ah mar kale dib ugu soo noqday madaxtinimada Somaliya. Shirkii Jabuuti wuxuu dowladda Somaliyeed ee halkaas lagu dhisay ka noqday Wasiirka Maaliyadda, maadaama uu ogaa halka ay Ummadda Somaliyeed ka liidato. Kulanka Jabuuti Shariif Xasan si mar uun u soo galo madaxda Somaliya ayuu aad ugu lug lahaa In Somaliya ay yeelato Baarlamaanka tiradiisu gaarayso 550 xubnood.
Waa lala wada socdaa, Shariif Xasan Muddadii uu Xukuumadda Somaliya ka ahaa Wasiirka Maaliyadda wuxuu si caddan ah oo bareer ah u lunsaday hanti fara badan, taas oo qaar ka mid ah Xildhibaanada Somaliya, gaar ahaan Guddiga baarlamaanka u qaabilsanaa dhinaca maaliyadda iyo dhaqaalaha ay ku soo oogeen Mooshin ka dhan ah.
Isla markiiba dhinaca kale ayuu ka wareegay. Wuxuu madaxa isu geliyey oo iska horkeenay Madaxweyne Shariif oo uu markaas isaga dhigayey nin daacad u ah, R/wasaare Cumar C/rashiid Cali iyo Guddoomiyihii Baarlamaanka. Isagoo adeegsanaya hantida Ummadda, ayuu si aan qaanuunka waafaqsanay meesha uga saaray Aden Madoobe.
Shariif Xasan isagoo ku eedeysan lunsasho iyo xatooyo xoolo dadweyne, isla markaana la xisaabtan aan lagu samayn ayuu mar kale noqday Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliya. Waa arrin laga murugooda oo aad looga naxo. Wixii markaas ka dambeeyey hoggaaminta Somaliya waxay gacanta u gashay Shariif Xasan Sh, Adan (Shariif sakiin) oo shaqsiyaddiisu ay tahay dembi socda.
Wuxuu musuq-maasuqa gaarsiiyey heer mudanayaasha baarlamaanka Somaliya la aamini waayo, heer guud ahaan sharafta Somaliya ay gaarto meel hoose, heer boobka xoolaha Ummadda uu noqdo yaan lagaa badsan iyo heer dukumentiga dowladda Somaliyeed uu noqdo mid suuqyada (Cabdalla Shideeya) laga samaysto. Shariif Xasan Sh. Adan intii uu guddoomiyaha ahaa wuxuu bishii mushahar ahaan u qaadan jirey $ 80:000
Kulan ay Baarlamaanka Somaliya isugu yimaadeen magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 16/12/2012, oo ay uga hadlayeen musuq-maasuqa hay’adaha ayaa eed kulul waxaa looga jeediyey Hay’adda UNDP oo iyadu bixin jirtey mushaarada xubnaha Baarlamaanka KMG ee Somaliya.
Hay’adda UNDP ayaa lagu eedeeyey in ay lunsatay lacag gaaraysa $ 4.000.000, taas oo heshiis hoose kaddib uu fududeeyey Shariif Xasan Sh Adan oo markaas ahaa Guddoomiyaha Baarlamaanka. Sow wax lala yaabo ma ahan ninka sidaas wax isu-damarinaya oo dembiilaha ah, weliba maanta isagoo ah xildhibaan in uu dhex fadhiyo golaha baarlamaanka Somaliya oo ay joogaan rag sharaf iyo haybad leh, oo aan u xulanay in ay Somaliya badbaadiyaan…. Sidee arrimahan isu qabanayaan.
Xisbiga Waamo National Party wuxuu qabaa in haddii aynu wax saxayno aynu guryaheena iyo xafiisyadeena ka bilowno… oo isla xisaabtanka Shariif Xasan Sh. Adan aynu ka bilowno.
Mas’uuliyiinta Somaliya, Guddoomiyaha Baarlamaanka, Madaxweynaha, R/wasaaraha, Wasiirka Arrimaha Gudaha, Wasiirka Caddaladda iyo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, waxaanu ka codsanaynaa in ay il gaar ah ku eegaan tallaabooyinka munaafaqadda leh ee uu ku hawlan yahay Shariif Xasan Sh. Adan. Dadka Waa in ay metelaan xubno nadiif ah, oo wax wanaagsan ka qaban kara xiriirka qabiilkooda iyo kuwa kaleba. Shariif Xasan oo kale in dadka lagu sii daayo waa mas’uuliyad darro madaxda Somaliya ku imaanaysa, waxaana loo baahan yahay in la xakameeyo tallaabooyinkiisa inta goori goor tahay ee aysan talo faraha ka bixin.
Waa nasiib darro in Shariif Xasan uu weli ku sii jiro dembiyo noocaas oo kale ah. Shariif Xasan wuxuu iminka u soo jeestey in uu colaad iyo kala dilid uu dhex dhigo walaalaha Somaliyeed ee Gobolada Dalka.
Wuxuu doonayaa in uu mar kale war iyo waxaan loo baahnayn isaga gudbiyo Beesha uu ka soo jeedo iyo beelo kale. Sida waaya aragnimadu na barayso, waxaa la joogaa waqtigii far iyo suul la isaga qaban lahaa kuwa dhibka iyo shidada Somali ka dhex wada. S
hariif Sakiin waa nin dembiile ah oo ay maxkamad dadweyne sugayso. Isaga iyo kuwa la midka ahna maba mudna in ay xildhibaan Somali sii ahaadaan, si cudurka cadhada ah ee ay qabaan aysan walaalaha kale u qaadsiin.
Shariif Xasan Adan (Shariif Sakiin) waxaan uga digeynaa in uu faraha la soo galo hawlaha Gobolka Shabeelaha Hoose. Dekedaha iyo barwaaqada gobolka Sh/hoose in aad dad kale iyo dowlado kale kula shirkowdo waa waxaan kuu soconayn. Waxaan kuu soo jeedinaynaa, waaba haddaad wax maqlaysee, in aad ka fogaato gebi ahaan ka soo dhex-muuqashada bulshada Somaliyeed meel kasta oo ay tahay. Adigoo boqol dembi ay kugu cad yihiin (dembiile dad ku talo ma ahee), halkii aad cafis iyo dhuumasho ku noolaan lahayd in maanta waxaagii xilka lahaa aad dib ula soo baxdo, waa kuu aqoon iyo ayaan darro, cid kaa yeeleysana ma jirto
Posted on December 26, 2012, in Moment Research & Consultancy. Bookmark the permalink.	Leave a comment.